Mikarakara fiaraha-midinika ao amin’ny IGF ny mpikambana Rising Voices · Global Voices teny Malagasy
Hampiantrano famelabelaran-kevitra amin'ny Dinika Fitantanana Aterineto koa ny Rising Voices
Voadika ny 29 Desambra 2021 3:57 GMT
Pejin'ny hetsika IGF. Azo ampiasana.
Tamin'ny 8 Desambra, niresaka mikasika ny paikadin’ny fiaraha-miasa amin'ny fikatrohana ankihy anjotra ho an'ny fiteny tsy dia fahita firy izahay tao amin'ny Dinika Fitantanana ny Aterineto.
Tamin'ny 8 Desambra 2021, ny Global Voices, tamin'ny alalan'ny hetsika Rising Voices, dia niara-niasa tamin'ny O Foundation nampiantrano ny dinidinika anjotra nandritra ny fihaonamben’ny Firenena Mikambana mikasika ny Dinika Fitantanana Aterineto (Internet Governance Forum – IGF), fihaonambe iraisam-pirenena lehibe ahitana ireo mpandray anjara lehibe amin'ny aterineto ao anatin’izany ny solontena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, firenena ao amin'ny Firenena Mikambana, ny mpandrindra, ary ny fikambanana tsy miankina ankoatra ireo hafa.
Niditra lalina amin'ny hetsika fikatrohana nomerika amin'ny fiteny any amin'ny faritra samihafa ny famelabelaran-kevitra, mitondra ny lohehevitra hoe “Manangana ny wiki-way ho an'ny fiteny tsy dia fahita firy” ary nifantoka tamin'ny sehatra telo lehibe dia ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpikatroka nomerika amin'ny fiteny, ny fampivoarana ny fitaovana teknolojia amin'ny fiteny samihafa sy ny sehatry ny teknolojia maimaimpoana toy ny Wikipedia sy Wikidata ho fiaraha-miasa amin’ny fampandrosoana sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny teknolojia sy ny votoaty.
Rentsika ao ny momba ny hetsika ataon'ny Rising Voices manokana toy ny Fitaovana Fikatrohana Nomerika sy ny Atrikasa Fikatrohana Nomerika amin'ny fiteny ho an'i India izay nokarakaraina vao haingana, ny fampiasana Wikidata (tetikasa rahavavin’ny Wikipedia) ho an'ny fiteny tsy fahita firy, ny fianarana avy amin'ny Wikipedias amin'ny teny Yorùbá sy Dagbani, ary ny fampivelarana loharanom-pitenenana amin'ny teny Sakha.
Ireto no nandray fitenenana:
Eddie Avila, talen'ny Rising Voices, hetsika avy amin'ny fikambanan'ny fampitam-baovaon’ny olom-pirenena Global Voices, ary iray amin'ireo mpiaro fototra ny fikatrohana nomerika amin'ny fiteny ho fiarovana sy fampivoarana ny fampitoboana ny teny tsy dia fahita firy.
Amrit Sufi, mpandrindra ny tetikasa Fandikana An-tsoratra ny Kolontsaina Am-bava, fitaovana iray ahafahan'ny olona mahazo vaovao mikasika ny fomba fanesehana fampitam-baovao avy amin'ny fiteny tandindonin-doza, ary efa niasa teo aloha tamin'ny fanaovana tatitra momba ny hira nentim-paharazana amin'ny fiteny Angika ao India.
Sardana Ivanova, mpianatra manomana doctorat amin'ny Siansa Informatika ao amin'ny Oniversiten'i Helsinki. Liana amin'ny fiteny tsy dia fahita firy izy. Manao fikarohana izy ary miasa amin'ny fampivoarana ireo fitaovana teknolojia amin'ny fiteny isan-karazany ho fanohanana ny teny Sakha, izay be mpampiasa indrindra any amin'ny faritra Farany Atsinanan'i Rosia.
Mahir Morshed, mpianatra manomana doctorat amin’ny fikarohana ireo toetra fampifandraisana sy fikarohana ny singa amin'ny fomba fanehoana kabary. Amin'ny maha Wikimediana azy, dia vao haingana izy no nandray anjara tamin'ny fomba fananganana boky tamin'ny Wikidata ary mandinika ny fomba ahafahana mampiasa izany amin'ny fampiterahana lahatsoratra.
Ọmọladé Abídèmí, manam-pahaizana amin’ny fiteny Yorùbá avy any Nizeria. Ny hampandroso ny firoboroboan'ny Wikipedia Yoruba no ifantohany ary ny fanentanana ny vondrom-piarahamonina Yorùbá mba hanaparitaka bebe kokoa ny Yorùbá manerana an'i Nizeria.
Khadijah Abubakari, mpampianatra matihanina ary mpisolovava amin’ny fiteny Dagbani ao Ghana. Mampiasa Wikipedia ho fitaovana hanaparitahana sy hampitomboana ny teny Dagbani amin'ny alalan'ny fifampizarana fahalalana sy vaovao ao anatiny sy ivelan'i Ghana izy sy ireo vondrom-piarahamonina mpikambana miaraka aminy.
I Subhashish Panigrahi no nandrindra ny dinidinika izay mpandray anjara ato amin'ny Global Voices, mpikatroka nomerika amin'ny fiteny ary mpiara-manorina ny O Foundation.
Eto no fisoratana anarana ho an’ny mpanatrika ny fivoriana an-tserasera. Azo jerena eto ny antsipiriany bebe kokoa momba ny fandraisana anjara.